Bevohoka, miteraka; Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Ny fiterahana, ny fiterahana
Tantarao amiko ny mponina any Karaganda, amin'izao fotoana izao any amin'ireo toeram-pitsaboana any amin'ny fiterahana, ny zaza dia aterina VIKASOL. Moa ve izany dingana mandidy izany na amin'ny fankatoavan'ny reny?
Mponina haingana ao Karaganda, ankehitriny any amin'ny hopitaly fiterahana, dia ampidirina VIKASOL ny ankizy. Fomba fanao tsy maintsy atao ve izany sa misy faneken'ny reniny? Manorata famoahana an-tsoratra mialoha. Ary izany dia ho an'ireo izay mihevitra ny tenany ho be ...
2 mankany 1 Kajtex Tramonto 14 flax. Iza no manana kamboty toy izany?
2 amin'ny 1 lambam-pandriana Kajtex Tramonto 14. Iza no manana an'io stroller io? tsy mety ny mamerina ny kazyrk, Tompoko, kalesy vita amin'ny karipetra avy amin'ny rindrina ve ny kalesy? !!! Tiako. fa! sooo tsy mahazo aina ...
Ahoana no mahatonga ny fahaterahana any amin'ny hopitaly? Inona no anton'izany?
Ahoana ny antony hiterahan'ny zaza ao amin'ny hopitaly? Inona avy ireo lafy ratsy? Misy fatiantoka lehibe iray amin'ny fanentanana ny fiterahana - ny vatana dia tsy vonona hiteraka. nanentana ny vozoko izy ireo, nanindrona izany tao am-bohoka nandritra ny iray andro ...
Ny fonosana generic-inona no misy ao.
Fonosana ankapobeny - inona no ao anatiny. mora kokoa sy mora kokoa ny mividy vonona amin'ny fivarotam-panafody. Ity fonosana ity dia misy andiana gynecological diaper azo ampiasaina, saron-doha azo, fonosana kiraro, akanjo, sns. Fehiny, inona ...
Ohatrinona ny ilanao hosotroina, akanjo ary ny zavatra hafa rehetra hanomanana ny zaza vao teraka?
Firy ny lamba firakotra, akanjo lava ary ny zavatra hafa rehetra mila omanin'ny zaza vao teraka? Tsy mifono lamba izahay, manana diapera mafana 10-12 sy mahia manify 5 izahay, ampy tsara izany. Ny palitao sy ny slider mila 5 farafahakeliny ...
Ahoana no nifidiananao fandroana ho an'ny zaza vao teraka? amin'ny inona ny fepetra?
ahoana no nifidiananao fandroana zaza? amin'ny critère inona? Tsy misy. Mandritra ny 2 volana dia nanasa ny akanin-jaza tao amin'ny fandroana mahazatra izahay, ary rehefa nihahery izahay dia nividy slide, dia napetraka tao amin'ny fandroana ...
Olona iray no teraka 25-27 herinandro? Na mety misy olona mahazatra toy izany ve?
Nisy ve teraka tamin'ny 25-27 herinandro? Sa mety misy olom-pantatra toy izany? nanana tranga ny mpinamana tamin'ity fahavaratra ity, rà mandriaka fotsiny no nisokatra ary tsy maintsy nanao caesarean, teraka ny zazalahy iray, isaorana Andriamanitra ...
Ry vehivavy malala, lazao ahy hoe: Manao ahoana ny vidin'ny duphaston amin'ny pilina pilina, ahoana no haka azy, inona no vokatra azo?
Ry vehivavy malala, lazao amiko hoe: Ohatrinona ny vidin'ny dyufaston ao anaty fonosam-panafody, ahoana no raisina ?, Inona avy ireo vokany? Raha miteraka sy miaritra ny tanjona dia mila misotro ianao. raha tarehimarika sns sns ny tanjona dia aza misotro. 450 roubles ...
Nahasarika azy. hena amin'ny firy volana? Inona no atao hoe kisoa, akoho? tranonareo rehefa azonao omena?
hamitahana. hena afaka firy volana? izay hen'omby, henan-kisoa, akoho voalohany? ron-kena rahoviana no afaka manome? raha tsy misy allergy dia azonao atao ny manome henan'omby (akoho na henan'omby) nandrahoina enim-bolana, tamin'ny voalohany dia tena kely ...
Ovulation mandritra ny fadimbolana ????
Fananahana mandritra ny fadimbolana ???? Miaraka amin'ny ovulasi dia milatsaka matetika ny mari-pana. Ny mari-pana ambony toy izany dia mety amin'ny antony maro samy hafa - tsy fahampian'ny hormona amin'ny dingana voalohany, sy ny fivontosana, ary angamba anao ity ...
Afaka mihinana vary amam-bozaka ve aho?
Afaka mihinana vary ho an'ny reniko mitaiza ve aho ??? Azonao atao ...))) ... Gaga amin'ireo mummies aho - afaka mihinana saika ny zava-drehetra ianao amin'ny fampidirana vokatra vaovao fotsiny - mihinana kely ary jereo ny fihetsiky ny zaza - raha ara-dalàna ny fivalanana ary tsy misy fanehoan-kevitra mahazaka, dia ...
Hafiriana ianao no nankany amin'ny mpitsabo mpanampy voalohany? Ary ahoana no andehanan'ity fandraisana 1 ity?
Tamin'ny vanim-potoana nahabevohoka inona no nankanesanao voalohany tany amin'ny mpitsabo aretim-behivavy? Ary manao ahoana ity fandraisana 1er? amin'ny 10 herinandro. mahazo karatra bevohoka. voasoratra ao daholo ny fampahalalana momba anao ...
Afaka mandrotsaka ve aho mandritra ny fitondrana vohoka ????
afaka manjaitra ve aho mandritra ny fitondrana vohoka ???? Nanjaitra fanjaitra sy tànana (macrame) aho, samy teraka izy roa vavy, tsara tarehy sy salama, izay no iriko ho anao. Ary ny amin'ireo famantarana, ovao ny fihetsikao ...
Iza amin'ireo zazavavy ireo no nitondra an'i Duphaston? Nahoana no nosoratana izany?
Iza amin'ireo reny miandry vady no naka an'i Duphaston? Fa maninona no voatendry? Anontanio ao amin'ny www.babyplan.ru - tranokala tsara. Duphaston dia fanafody fitsaboana hormonina ary ampiasaina hanitsiana ireo toe-pahasalamana isan-karazany mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny progesterone. ...
Na azo atao ny mampiasa ny fitsirihana ny fitondrana vohoka amin'ny volana isam-bolana.
azo atao ve ny mampiasa fitsapana bevohoka amin'ny fadimbolana. Azonao atao ny manao ny fitsapana mandritra ny vanim-potoana misy anao. Azo antoka fa tsy hahavery ny fahatokisany azy izy, satria misy fiantraikany amin'ny hormonina hCG. Noho izany, raha antenainao ...
firy no nahalasa anao ho bevohoka ???
hafiriana no nahabevohoka anao ??? Nisotro fanabeazana aizana aho, mba hitoe-jaza avy eo. taorian'ny nijanonako tsy nisotro azy ireo dia bevohoka aho afaka 2 volana. Io dia an'ny tsirairay. ohatra ahy…
izay nanala zaza tamin'ny alàlan'ny fitsaboana ???? firy herinandro maromaro no vita, ary ahoana ny fahatsapanao aorian'izany?
iza no nanao fanalan-jaza ara-pahasalamana ???? hatramin'ny herinandro firy no vita, ary manao ahoana ny toetry ny fahasalamana aorian'izany ??? Azoko fa momba ny zavatra hafa ny fanontaniana. Fa na izany aza, azonao atao ve ny manao fanalan-jaza? Ny vokany ara-batana dia ho sitrana, ary ...
Afaka manomboka ny herinandro 29 ny zaza vao teraka ary hahatratra ny zaza velona ve ny zaza?
azo atomboka ao anatin'ny 29 herinandro ve ny fiterahana ary ho tafavoaka ve ny zaza ???? Tsy nanam-bintana aho, teraka tamin'ny 30 taona ilay zazavavy (((((... ary mety hisy fihenan'ny feonao.) Teraka tao ...
inona ny ultrasound dinamika? Fitarafana amin'ny taovam-pisefoana
inona ny ultrasound dinamika? Ultrasound an'ny taolam-paty Ity dia fanadinana ultrasound an'ireo taovam-piseza imbetsaka amin'ny elanelam-potoana iray. Amin'ny alàlan'ny fitarafana ny taovam-pisefoana an'ny vehivavy, nozahana ny tranon-jaza, ...
Ary oviana no manomboka ny toxicose amin'ny vehivavy bevohoka? Ary oviana no manomboka ny toxicose amin'ny vehivavy bevohoka?
Ary oviana no manomboka ny poizina amin'ny vehivavy bevohoka? Ary oviana no manomboka ny poizina amin'ny vehivavy bevohoka? taorinan'ny fanemorana, na angamba somary talohan'izay, tsy nisy Toxicose mihitsy aho tamin'ny tapany voalohany CAN ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 37 Next Page
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 6,539.